Dhaleeceeyn loo soo Jeediyey Carl Bildt - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Emil Östlund/Sveriges Radio.
Dhaleeceeyn loo soo Jeediyey Carl Bildt
La daabacay måndag 17 oktober 2011 kl 14.16
Iyada oo ay foodda innagu soo hayso maxkamaddii dacwadda lagu soo oogi lahaa suxufiyiinta iswiidhishka ee ku xabisan Itoobiya ayaa haddana waxaa cirka isku sii shareereeya dhaleecooyinka loo soo jeedinayo Carl Bildt, wasiirka arrimmaha dibadda ee dalkan Iswiidhen.
Dhaleeceeymahaa qaar ka mid ah ayey ka soo yeerayaan xubno ka mid ah asxaabta garabka midig ee uu ka tirsan yahay, sida ku cad maqaal lagu daabacay war-geeyska maalinlaha ee DN.
Carl Bildt ayaa dhaleeceeynta loo soo jeediyay tahay laba afle. Waa midda koowaade inuusan gelin awooddii looga baahnaa sidii taageero loogu fidin lahaa labada suxufi ee ku xabisan dalka Itoobiya iyo midda labaad hoowlihii uu ka hayay maamulkii shirkadda Lundin Petrolium iyo inuu ku khaldanaa ereyadii uu sheegay ee la xiriiray danta shirkaddu ka leedahay dalka Itoobiya.
Labada suxufi ee Martin Schibbye iyo Johan Persson ayaa gacanta lagu dhigay bilowgii bishii luulyo iyaga oo howl barnaamij u tagay carriga Ugaadeenya ee dalka Itoobiya. Iyadoo dabadeed qoraal laga helay Martin Schibbye sheegay in barnaamijka ey carrigaa u tageen la xiriiray shirkadda shidaalka ee Lundin Petrolium iyo howlaha ay carrigaa ka waddo.
Carl Bildt ayaa saami ku lahaa shirkadda Lundin Petrolium isagoona ka mid ahaa hoggaanka sare ee shirkadda sannadihii 2000 iyo 2006, waxeyna ka mid ahaayeen howlaha ey suxufiyiintu baaritaanka halkaa ugu tageen. Halka sidoo kale uu wasiirku awoodda ugu sarreeysa u leeyahay sidii suxufiyiintaa looga gacan-siin lahaa in xabsiga laga soo daayo.
Muddo iminka laba toddobaad laga joogo oo wasiirka arrimmaha dibaddu ka qeyb-galay barnaamijka idaacadda la iska daawado Svt ee lagu magacaabo Skavlan ayuu beeniyay in shirkadda Lundin Petrolium ka howl-gasho dalka Itoobiya:
Skavlan: - Ma mid aan wanaagsaneeyn baa in su'aashaa miiska la soo saaro? Shirkad aad ka howl-geli jirtay, aadna ka mid ahayd madaxdeeda. Iyadoo labada suxufi carrigaa u tageen sidii ey barnaamij baaritaan ah uga soo sameeyn lahaayeen.
Carl Bildt: - Haa haddii shirkaddu ku sagnaan lahayd halkaa.
Skavlan: - Laakiin waxay ka howl-geli jireen carrigaa ama shirkad iyada hoos timaada oo Itoobiya ka howl-geli jirtay?
Carl Bildt: - Maya, inta aan fahansanahay maanta kuma sugna carrigaa.
Skavlan: - Waxaad ka mid ahayd maamulka shirkadda, kolkii ay shirkad middaa hos timaada carrigaa ka howl-geli jirtay.
Carl Bildt: - May.
Skavlan: - Laakiin waa war-bixinta la i siiyay.
Carl Bildt: - Waa war-bixin khaldan.
Maqaal haddaba maalintii sabtidii lagu soo daabacay war-geeyska DN ayaa lagu sheegay in ereyada wasiirku ka sheegay barnaamijka Svt ahaayeen kuwo aan xaqiiqda ka tarjumeeyn.
Maadaama reer Lundin yihiin mulkiileyaasha ugu saamiga badan ee shirkadda Lundin Petrolium iyo shirkad hoos timaada ee Afrika Oil oo weli ka howl-gasha dalka Itoobiya.
Carl Bildt ayaa boggiisa xusuus-qorka ee internetka ku daabacay in war-geeysku si aan xaqiiq ahayn ugu dhaleeceeynayo inuu been abuurtay. "waayo shirkadda Lundin Petrolium - ee aan maamulkeeda ka mid ahaa illaa intii aan ka noqday wasiirka arrimmaha dibadda - kuma aanay lahayn wax mulkiya dalka Itoobiya. Intii aan maamulka shirkadda fadhiyay."
Kerstin Lundell, suxufiyad wax ka baartay howlaha Carl Bildt, ayaa u sheegtay war-geeyska DN in aan xaaladda sidaa loo arki karin.
Waa xaqiiq in xilligaa aanay shirkadda Lundin Petrolium aanay howlo markaa u socon, hase yeeshee muddadii heshiisyada laga wada hadlayay wuxuu Carl Bildt ka mid ahaa maamulka sare ee shirkadda. "Sida caadiga ah waxaa la yiraahdaa haddii ganacsi laga wada xaajoonayo howl-ayaa la wadaa", sida ay sheegtay Kerstin Lundell.
Mar ay u warrameeysay idaacadda P1-na waxay tiri:
- Waxaan oran karaa inuu yahay xaalad labada dhinac midba lug lagula jiro (jäv). Maadaama suxufiyiintu carrigaa u tageen sidii ey barnaamij baaritaan ah uga soo sameeyn lahaayeen howlo biloowday xilli uu Carl Bildt ka mid ahaa maamulka shirkadda. Waxayna ahayd inuu kala taliyo howlahaa in aanay shirkaddu ka qayb qaadan. Waayo waxaa jiray xaalado adkeeynayay baaridda olyada iyo gaaska laga baarayo carriga Ugaadeenya.
Horraantii bishan oktoobar ayey dhowr mudane ee baarlamanka u matala xisbiga Doogu mooshin hor-geeyeen baarlamanka iyagoona soo jeediyay inay ahayd in madaxa dawladda Fredrik Reinfeldt uu howshaa la wareego, tusaalana ay u soo qaateen Carl Bildt howlihii uu ka soo qabtay shirkadda. Carl Bildt ayaa dhaleeceeyntaa iska dheereeyay mar uu shir-jaraa'id qabtay:
- Wax is leh maaha waxa laga hadlayo, iyaguna ma sharixin sida ay isku waafaqi karaan. U maleeyn maayo in shirkadda Lundin Petrolium ay carrigaa ku sugneeyd oo xitaa haddii ay halkaa shirkaddu ku sugnaan lahayd maaha wax muhiimad ku fadhiya. Waxaan ku howlanayn shakhsiyaad gaara ah. Mana ahan wax caawinaya haddii dalka gudihiisa laga siyaasadeeyo.